Topzọ 5 kacha mma iji bulie usoro ịkwụ ụgwọ ekwentị gị | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 26, 2017 Eran Feinstein
Smartphones na mbadamba na-arịwanye elu ngwaọrụ ndị mmadụ na-eji kwa ụbọchị. N'ihe banyere ecommerce, ịkwụ ụgwọ ekwentị na-aghọ nhọrọ a ma ama, n'ihi ịdị mfe na ịdị mma nke ịkwụ ụgwọ ebe ọ bụla, n'oge ọ bụla, na-enweta obere ọkpọ. Dị ka onye na-azụ ahịa, ịkwalite usoro ịkwụ ụgwọ ekwentị gị bụ uru bara uru nke ga - eduga n'ịba afọ ojuju ndị ahịa, na n'ikpeazụ - ahịa ndị ọzọ.
Usoro ịkwụ ụgwọ dị ala ga-egbochi gị iru ebumnuche azụmahịa azụmaahịa maka ụlọ ọrụ gị ma nwee ike ibute ọnụọgụ ụgwọ dị elu. Ọ bụrụ n’ịchọpụtala ihe ịrịba ama ndị a, ọ kacha mkpa ka ị meziwanye ihe. Enwere usoro ole ị ga - eme iji bulie usoro ịkwụ ụgwọ ekwentị. Ndị a bụ isi ise:
1. Mepụta Saịtị Enyi na Enyi
Nke a bụ akụkụ kachasị mkpa n'ịmepụta usoro ịkwụ ụgwọ mkpanaka dị mma. Ebe nrụọrụ weebụ gị kwesịrị ịzaghachi - ịhazi onwe ya maka iji ekwentị ka ndị ọrụ wee ghara ịbawanye ma ọ bụ pịa obere bọtịnụ. Ebe nrụọrụ weebụ na-adịghị mma maka ngwaọrụ mkpanaka na-akụda mmụọ ma nwee ike igbochi ndị ahịa ịmecha usoro ịkwụ ụgwọ kpamkpam. Dabere na Adobe, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 8 n’ime ndị na-azụ ahịa 10 ga-akwụsị itinye ọdịnaya na ọ bụrụ na egosighi nke ọma na ngwaọrụ ha.
Cleandị dị ọcha, nke dị ntakịrị, na nnukwu bọtịnụ na ederede dị mfe ọgụgụ, ga-enyere onye ahịa aka ịga n'ihu ngwa ngwa site na ịzụ ahịa na usoro azụmahịa. PSfọdụ PSPs nwere ike ịnye peeji nke ịkwụ ụgwọ akwụ ụgwọ maka ndị ọrụ ekwentị.
Na mgbakwunye na ebe nrụọrụ weebụ enyi na enyi, ị nwekwara ike ịmepụta ngwa mkpanaka. Ndị ọrụ nwere ike ibudata ngwa ahụ na ngwaọrụ mkpanaka ha ma mepee ya na otu mgbata, na-echekwa akara gị na mkpịsị aka ha, 24/7.
2. Nye Mobile mentzọ mentzọ
Ọ nwere ike ịdị ka ikwupụta ihe doro anya, mana inye onyinye ụzọ nkwụnye ụgwọ ekwentị bụ oké ụzọ iji na-adọta ndị ahịa na mobile ngwaọrụ. PSP ị na-arụ ọrụ kwesịrị inwe ike iwekọta usoro ịkwụ ụgwọ ekwentị, dị ka obere akpa ego na ego mkpanaka, nke na-enye ndị ọrụ ohere ịkwụ ụgwọ na ekwentị ha. Paymentzọ ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ, dị ka iji kaadị akwụmụgwọ, gụnyere itinye ozi na aka, nke siri ike na obere enyo ma na-ewe oge dị ukwuu. N’ụzọ dị iche, enwere ike ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ na obere swipes na taps. Usoro ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa, ka o yikarịrị ka onye ahịa ọ ga-ezu iji mezue ya, na-ebelata ịgbahapụ ụgbọ ibu azụmahịa.
3. Kwe ka Omni-ọwa Shopping
Teknụzụ dị ebe niile - ị nwere ike ịnwe ọtụtụ ndị ahịa na-amalite na-eme nchọgharị na weebụsaịtị gị n'ụlọ wee chọọ ịmechaa nzụta ha na-aga, jiri ngwaọrụ mkpanaka ha. Ọ bụrụ na ụzọ ịkwụ ụgwọ gị na-agbanwe agbanwe, nke a na-abụ nsogbu. Nyocha site na Aberdeen Group achọpụta na ụlọ ọrụ ndị nwere ikike ịbanye na azụmaahịa ndị ahịa niile nwere ọnụego njigide 89%, ma e jiri ya tụnyere naanị 33% na-enweghị. Ebe nrụọrụ gị ma ọ bụ ngwa mkpanaka gị kwesịrị ịdị ka saịtị desktọọpụ gị n'ile anya. Okwesiri inye otu uzo ugwo a - gwa PSP gi iji hu na nke a bu ihe puru ime.
4. Gbaa mbọ hụ na ị raara onwe gị nye maka nchekwa maka ekwentị mkpanaaka
Nchebe wayo dị mkpa maka mpaghara ecommerce niile, mana egwu egwu dị iche na ntanetị. Mgbe ị na-ahọrọ PSP, gbaa mbọ hụ na ha nwere ike inye gị nchekwa echekwara maka ịkwụ ụgwọ ekwentị, ebe ọ bụ na igwu wayo n'iji ekwentị eme ihe na-adịkarị iche na nke aghụghọ e mere na ịntanetị. Dị mfe nke usoro ịkwụ ụgwọ ekwentị yana obere ozi nke onye ọrụ tinyere nwere ike ime ka ihe egwu dịkwuo njọ, na-eme ka nchekwa bụrụ ihe kachasị mkpa. Usoro nchekwa mkpanaka gụnyere ngwaọrụ nsuso yana ịhazi ọnọdụ ha na adreesị ịgba ụgwọ na mbupu ụgbọ mmiri, yana nyochaa ngwaọrụ karịa oge, iji chọpụta azụmahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla na-enyo enyo.
5. Na-arụ ọrụ na PSP nke na-enye ngwọta edozi
Anyị ekwuola maka otu esi eme ka ahụmịhe ndị ahịa ka mma, mana gịnị banyere gị? Dịka onye na-azụ ahịa, ị ga-achọ ka usoro ịkwụ ụgwọ mkpanaka ga-adị mfe ijikwa. A ọma onye na-eweta ugwo ugwo (PSP) ga - enye agwakọta maka ekwentị mkpanaaka na desktọọpụ, yana usoro ịkwụ ụgwọ dị iche iche. Ha kwesiri inye ngwa ndi n’eme ka odiri gi mfe igbako ahia ugwo. Ngwaọrụ ndị a nwere ike ịgụnye ngwa mmepe sọftụwia na API ịkwụ ụgwọ mkpanaka.
Usoro ịkwụ ụgwọ ekwentị kachasị mma pụtara ịmepụta ahụmịhe mkpanaka iji kwado mkpa nke onye ọrụ mkpanaka. Mepụta ebe nrụọrụ raara onwe ya nye nke na-egosipụta saịtị desktọọpụ gị, ma kee ya nchebe na usoro ịkwụ ụgwọ kwesịrị ekwesị, maka ndị ahịa na-enwe obi ụtọ karịa, na mmụba ụba.
Tags: ngwa ahiamobile enyi na enyiugwo ugwomobile ncheomni-uzo ahiapp
Nchịkọta Ihe Omume Ntanetị Ntanetị Ntanetị ma ọ bụ Onye Na-asọ mpi?